को ब्रेक पैड को न्यूनतम मोटाइ। ब्रेक प्याड वेयर कसरी निर्धारण
वाहन ब्रेक लगान सिस्टम सुरक्षित ब्रेक लगान लागि जवाफ। यो एक स्टप गति को उपयोगिता र दक्षता मा निर्भर गर्दछ। पर्याप्त ठूलो छ ब्रेक मा तंत्र को नम्बर, र तिनीहरूले एक को विफलता अप्रिय परिणाम को एक न्यूनतम entail हुनेछ किनभने सबै घडी को कल जस्तै रन पर्छ। गरेको को पहनने कसरी जाँच गर्न बारेमा रूपमा राम्रो तरिकाले, ब्रेक पैड को न्यूनतम मोटाइ हुनुपर्छ के कुरा गरौं।
जूता को मुख्य प्रकार
हालैका वर्षहरूमा मा, मोटर वाहन उद्योग अगाडि leaped छ। आधुनिक कार सामान्यतया एक उन्नत ब्रेक लगान सिस्टम प्रणाली को उपलब्धता छ, कम्प्युटर-नियन्त्रण। यो मिसिन को लगातार विकास ब्रेक पैड को प्रकार को प्रगति गर्न जान्छ ABS, ESP स्थिरता प्रणाली, र यति मा। एन समावेश गर्नुपर्छ। त्यहाँ निम्न प्रकार छन्:
एक semimetallic घर्षण पत्र (65% तामा, फलाम पाउडर, तार);
जैविक सामाग्री (रबर, गिलास, Kevlar) को घर्षण पत्र;
70/30 को एक अनुपात) मा जैविक र धातु अशुद्धियों;
तामा एउटा सानो संस्थापन संग चीनी माटो घर्षण पत्र।
यी प्रकार प्रत्येक यसको आफ्नै तागत र कमजोरी छ। उदाहरणका लागि, semimetallic घर्षण तह राम्रो गर्मी अपव्यय छ, तर यो चाँडै बाहिर पहनता र सञ्चालन समयमा हल्ला धेरै emits। तर जैविक वस्तुतः कुनै हल्ला र काम बिस्तारै देखि ब्रेक जूता मा अस्तर, तर प्रक्रिया मा उत्पादन धूलो धेरै व्हील ड्राइभमा settles। एक चीनी माटो सबैभन्दा उपयुक्त छन् भनेर भन्न सकिन्छ। कुनै हल्ला र पनि चाँडै बाहिर लगाउने। आफ्नो मात्र drawback - उच्च लागत।
पैड किन पनि चाँडै बाहिर लगाउने?
त्यहाँ पहिले प्याड वेयर लागि केही स्पष्ट कारणहरू छन्। तपाईं अक्सर सुस्त छ जब शहर, मार्फत स्थायी राइडिङ। यो लगाउने मात्र होइन, तर पनि एक उच्च तापमान डिस्क पैड जान्छ। धेरै मोटर चालकहरुलाई दीर्घ र भारी ब्रेक लगान संग आक्रामक ड्राइभिङ रुचाउँछु। यो पनि उच्च पहनने दर गर्न जान्छ। जबकि शान्त सवारी अक्सर दीर्घकालीन को ब्रेक को "जीवन" मा जान्छ।
तपाईं अक्सर सामान ड्राइभमा लोड भने, यो, त्यसको विपरीत, क्रमशः अगाडि एक्सल र ब्रेक मा लोड कम गर्न मद्दत गर्छ छ। सामान्य मा, ब्रेक पैड मा पैड निर्माता द्वारा निर्दिष्ट समय भित्र परिवर्तन गर्न सिफारिस गरिएको हो। को रियर धुरा लागि सामान्यतया 40 000 मी, र अगाडि लगभग 20 000 मी छ। क्षतिग्रस्त भए तापनि तिनीहरूले गर्न सक्छन्, रूपमा, र एक सानो पछि, यो राम्रो नियमित जाँच पूरा गर्न छ।
जब ब्रेक पैड परिवर्तन गर्न आवश्यकता?
चलान र स्वतः निर्माताहरु साथै प्रतिस्थापन आवश्यक छ जसमा घर्षण अस्तर को न्यूनतम अनुज्ञेय मोटाइ निर्दिष्ट गर्नुहोस्। आखिर, कहिलेकाहीं यो तपाईं पहिले नै नयाँ रूपमा पार भनेर 20-30 हजार। किमी र पैड, वा विपरित, सानो यात्रा, र वेयर पहिले नै महत्वपूर्ण छ हुन्छ।
यो वाहन को अर्थ र वजन छ। साना कार वजन, अधिक बिस्तारै पैड विपरित लगाउने र। तर प्रायजसो, विभिन्न टिकटहरु मा ब्रेक प्याड को न्यूनतम मोटाइ लगभग एउटै छ र बारेमा 2-3 मिमी छ।
कहिलेकाहीं महत्वपूर्ण गिरावट पाङ्ग्रा हटाउने बिना पनि, नेत्रहीन देखेको। यस मामला मा एक अक्ष पूर्व-सेट शेयर सम्भव छ। को साधन प्यानल प्रतिमा माथि रोशनी मा (यो विकल्प छैन सबै कार मा छ) भने एक इलेक्ट्रोनिक सेंसर घर्षण अस्तर को न्यूनतम उपयोगी मोटाइ निर्धारण गर्छ लोड।
"संगीत" पैड र पिटाइ
त्यहाँ ओभरले को उत्पादन निर्धारण गर्न अनुमति धेरै संकेत हो। तपाईं हालै प्रदर्शन भने प्रतिस्थापन ब्रेक प्याड, मूल्य आश्चर्यजनक कम थियो जसको लागि, त्यसपछि तिनीहरूले "संगीत" हुनेछ भन्ने डर छैन। यो आफ्नो कम गुणस्तर र मिश्र धातु संरचना केही तत्व को अपर्याप्त मात्रा गर्न बताइएको छ।
तर त्यहाँ पनि जब यो ब्रेक पैड को न्यूनतम मोटाइ पुग्छ एक विशिष्ट ध्वनि फेंकना विशेष प्रणाली हो। यसले प्रतिस्थापन गर्न समय छ कि चालक चिन्ह छ।
ब्रेक लगान बेला पिटाइ रूपमा यस्तो घटना लागि जाँदा, त्यसपछि यसलाई थप गम्भीर छ। आफ्नो भाग मा न्यूनतम घाटा - सामान्य प्रतिस्थापन पैड। सबैभन्दा खराब अवस्थामा यो वा डिस्क ड्रम प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ। कारण पिटाइ ब्रेक पैड वा ब्रेक डिस्क, चिप्स वा घर्षण पत्र चर्किएको को असमान पहनने को एक परिणाम रूपमा हुन्छ भन्ने छ। असमान वस्त्र, बारी मा, पैड वा डिस्क को कम गुणस्तर कारण हुन सक्छ। कुनै पनि मामला मा स्थिति समस्या एक तीब्र समाधान को लागि भनिएको छ।
के कसरी गर्न मा
हरेक कार मालिक नियमित यसको ब्रेक लगान सिस्टम गर्ला। यो माथि बाटोमा दुर्घटना गर्न, परिणाम को एक किसिम गर्न जान्छ। यदि आफ्नो यार्ड मा एक रूख, र के मा एक दुर्घटना गर्न भने, अझै पनि राम्रो भएको ब्रेक असफल राजमार्ग मा? निस्सन्देह, अनुभव मोटर चालकहरुलाई इन्जिन ब्रेक लगान प्रयोग गर्नेछ, तर सबैको बाहिर आंकडा के भइरहेको छ समय छ।
यसैले, ब्रेक पैड अस्तर तल धातु गर्न लगाउने भनेर अनुमति कहिल्यै। यो ब्रेक डिस्क क्षति नेतृत्व र अन्ततः कार्य बाहिर सिस्टम ल्याउन। नियमित रूपमा ब्रेक अवस्था जाँच गर्नुहोस्। गाह्रो छैन र स्वतन्त्र बनाउन। यो आवश्यक छैन कार हरेक5thous। किमी अन्तर्गत चढ्नु छ, तर समय आउँछ जब अल्छी हुन छैन।
के निष्कर्ष हामी सक्छौं?
यहाँ हामी तपाईंलाई हुनुहुन्छ र ब्रेक प्याड वेयर कसरी निर्धारण पत्ता। यो नेत्रहीन गरेको र शासक वा calipers प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं एक्लै यो मुद्दा सामना गर्न समय वा इच्छा छैन भने, त्यसपछि SRT यो कुरा विशेषज्ञहरु छोड्नुहोस्।
को ब्रेक प्याड को न्यूनतम मोटाइ 2-4 मिमी तर अनुमति मान जस्तै 1.5 मिमि हुनुपर्छ। मलाई - को प्लेट भन्दा कम छ भने। यदि उपयोगी दायरा भित्र, तर उपयुक्त - निकट भविष्यमा प्रतिस्थापन लागि तयार। यो पनि वेयर र तात्दै लागि ब्रेक डिस्क नियमित जाँच गर्नुपर्छ। तथ्यलाई गर्न उत्तरार्द्ध सुराकी डिस्क warps, र प्रणाली कम कुशलतापूर्वक काम गर्दछ - ब्रेक लगान दूरी बढ्दै र त्यहाँ पिटाई छ। त्यसैले हामी तपाईँलाई ब्रेक पैड प्रतिस्थापन गर्दा बाहिर समझ। मूल्य को विक्रेता आधारमा फरक छ र 800-3500 rubles दायरा। तर हामी सस्ता "सांगीतिक" घर्षण अस्तर लिन हुँदैन।
कार "बीएमडब्ल्यू F10" (बीएमडब्ल्यू F10): विनिर्देशों, परीक्षण ड्राइभमा फोटो
बिजुली VAZ-2107: जडान र क्षेत्रीय यन्त्र। योजना बिजुली प्रणाली मिश्रित
लेडी Godiva साँचो कथा
क्रममा निवास दुष्ट सबै भागहरु। मुख्य खेल श्रृंखला को विवरण
सेन्ट पीटर्सबर्ग अस्पतालमा ubiysvte दुई नर्स मा Suspects पक्राउ
स्पेक्ट्रल विश्लेषण र स्पेक्ट्रा प्रकार
सुझाव र चाल: iCloud कसरी सफा गर्न
कुकुर टिकटिक: पशुहरू मदत गर्न के?
डिजाइन र विनिर्देशों "शेवरलेट Camaro" पछिल्लो पुस्ता